Pope Francis wuxuu jecel yahay sawirkan geesinimada leh ee gabadh dhalinyaro ah oo dhar jilicsan, webka ayaa shidan - TELES RELAY
Pope Francis wuxuu jecel yahay sawirkan geesinimada leh ee gabadh dhalinyaro ah oo dhar xijaaban leh, shiraaca ayaa shidan
Shabakada oo dhami waxay ka soo dhacday daruuraha, Masiixiyiintuna way ka sii darnaayeen, markii macluumaadka la faafiyay. Qunsulka guud ee hadda jira ayaa jeclaan lahaa toogasho kulul oo heer sare ah oo ah nooc ka labbisan iftiinka. Si kastaba ha noqotee, wax waliba way kala caddaanayaan markaan ogaanno taas Pope Francis ma maamusho shabakadaha bulshada lafteeda.
Isticmaalayaasha internetka way argagaxeen ka dibna waxay ku qosleen a `` Like '' ee Pope on Instagram
Markaad tahay shakhsiyad dadweyne, wax kasta oo yar ayaa kasbada xawli iyo tweet kasta wuxuu gaari karaa dadka adduunka. Tani waxay xitaa ka run tahay Pope Francis, oo hoggaamiya Masiixiyiinta Katooliga ee adduunka.
A "like" fudud ayaa noqon kara muran, iyo xitaa si ka sii daran, markay ka timaado nin qaatay wacad edbin laakiin laakiin jecel sawirka qaaska ah ee moodalka reer Brazil. Waxaan fahamsanahay in bulshada oo dhami ay kor u qaadayaan sunnayaasha, aad u sarraysa!
Xaqiiqdii, maalmo yar ka hor, dadka isticmaala internetka waxay ogaadeen mid ka mid ah kuwa jecel Natalia Garibotto, waa cid kale oo aan ahayn Pope Francis, maaddaama koontada Instagram ee Aabbaha Quduuska ahi ay jeclaatay sawir ay soo dhejisay gabadha yar tan iyo Oktoobar 5, 2020.
Waxaan ku arkeynaa gabadha yari mowqif aad u foolxun oo ka dhan ah waxa umuuqda safafka iskuulada, suunka hakinta iyo labbiska gaaban ee aadka u gaaban kaas oo si cad uga tagaya badhida hawada, taas oo xasuusinaysa labiska gabdhaha dugsiga, qaab '' Iskuulka Ameerikaanka ah ''. Dabeecad xumo, Natalia Garibotto ayaa ku jawaabtay: " Uguyaraan jannada ayaan aadayaa! »
Xusuusnow in gabadha da ’yarta ah ee laga hadlayaa ay tahay tusaale iyo saamayn, oo in ka badan 2,2 milyan macaamiil ah. Intaa waxaa dheer, waxay ahayd saaxiibtiis Kyrie Irving, Ciyaaryahan Australian-American ah oo Kubadda Koleyga ah.
Sidaad filan lahayd, waxaa jiray faallooyin fara badan oo la xiriira sheekadan. Si kastaba ha noqotee, inta badan dadka isticmaala internetka ayaa si weyn ugu riyaaqay sawirkan sulphurous ee la xidhiidha Pope. Waad aqrin kartaa faallooyinka sida: " Ilaah baa mahad leh, waxaan kugu helay adiga oo ku mahadsan Pope-ka! Iyo kuwo kale oo badan oo jees jees ah ama ciil ah.
Maareeyayaasha jahawareerka ee Vatican, waa ilaah loogu talagalay Natalia Garibotto!
Sida saameyn wax ku ool ah, buuqu wuxuu kaliya wanaag u sameyn karaa gacaliye Natalia Garibotto. Sidoo kale, gabadha dhallinta yar ee 27-ka sano ah waxay si dhakhso leh u qabatay dabayl-dhacan oo sidan oo kale ah koontada Instagram ee Pope Francis ay siisay.
Tani waa sida moodalku uga faa'iideystay xaaladdan si uu ugu diro casuumaad kuwa xiisaynaya ama xiiseynaya inay arkaan sawirro badan oo galmo ah. Sidaas darteed waxay ku casuuntay inay soo booqdaan degelkeeda si ay u aragto wax badan, sida ay tahay, kama lumineyso woqooyiga, Natalia Garibotto!
Dhanka Instagram-ka Pope Francis, in badan oo ka mid ah sheekadan waxay ku qosleen qaar badan oo kalena way ka shakisan yihiin waxa dhacay, waxaa jira kuwa ka naxay markay arkeen sawirka la midka ah. Pope ka. Si kastaba ha noqotee, waa lagu qancin karaa, maxaa yeelay, dabcan, maahan midka madax-weynaha ah ee jecel sawirka.
Waa inaad ogaataa in haddii kan dambe uu koonto ku leeyahay shabakadaha bulshada ee kala duwan si uu ugu dhawaado sida ugu macquulsan aaminka, maahan kan maareeya akoonnadiisa. Runtii, dhammaantood waxaa maamula koox weyn oo caalami ah oo ka mid ah maareeyayaasha bulshada, markaa suurtagal la'aanta in Pope Francis uu wax walba ka helay shabakad bulsheed isaga laftiisa.
Xitaa haddii Abaanduulaha Pontiff uu u muuqdo mid u furan arrimaha galmada, waxay u egtahay in tani ay tahay jahwareer loo aaneyn karo xubin ka mid ah shaqaalihiisa, kaasoo, isagoo doonaya inuu ku jeclaado akoonkiisa gaarka ah, adeegsaday koontada Pope. Francois.
haweeney da 'yarPope Franciskoox yar
Mitch McConnell wuxuu ugu hambalyeynayaa Joe Biden inuu yahay Madaxweynaha la doortay - New York Times